Njani malunga nokhuseleko kuba omdala ekhwele KANTI yombane? - Jomo Technology Co., Ltd
Ngoku ke ngezithuthuthu zombane waba ukhetho ethandwayo obumnandi okuhle. Abantu abatsha zikhwele isithuthuthu imali yombane , unako ukusebenzisa ukulingana kunye reflex namandla, kwaye ikhuthaze uphuhliso kwiCerebellum nokukhuthaza uphuhliso kwengqondo, ukuphucula kwegazi cardiopulmonary. Xa inkqubo ekhwele ibhodi eseleyo yombane , ngenxa yokuba kufuneka silondoloze ukulinganisela zihlunu ngalinye ilungu lomzimba sikwimo lomsebenzi obukhulu, intsalela ngokubanzi ngokusebenzisa intshukumo, ukuhlakulela ingqalelo yabo nesantya reaction, ukunyusa nezimo we umzimba, ukuphucula ukomelela ngokwasemzimbeni, ukuphucula ubukrelekrele, ngoko ke scooter self balancing Uhanjiso eyaziwa ngokuba yi "umdlalo puzzle", oko ukuhlakulela nokuphucula abantu abatsha inxaxheba, siqinisekile, elizimeleyo ubuntu, womelele, ndlongondlongo.
I ingqalelo yokuqala ukhuseleko abadala, nto leyo nayo ukuze bakunike inkxaso yosapho, kwaye sombane self balancing isithuthuthu ubuyithenga nokuba wadlula isiqinisekiso ul 2272 okanye hayi, kuba oku imisela ukhuseleko lwayo.
1. I- hoverboard self balancing intshukumo usebenzisa amandla ukulawula amandla balance umzimba, nto leyo yenza ukuba izihlunu umlenze ukubuyisa nokuphucula kakhulu, kwangaxeshanye, unyawo manqaku amaninzi amalungu omzimba womntu, umzantsi nembasa, unyawo zochuku kuqhubeka ukuvuselela Self Ukulinganisela Isithuthuthu yokukhwela, ungafumana acupoint ukukhuthazwa, ukuphucula umsebenzi omzimba.
2. Kule inkqubo ekukhweleni, ngenxa intsalela agcine, iindawo ezahlukeneyo izihlunu zomzimba eladlulayo, ungenza emagxeni, esinqeni, umlenze, iwotshi, umqolo kunye namanye amalungu aye abavavanywa. Ukuze ngempumelelo Ukomeleza umsebenzi umlenze, kunye nokugcina nezimo.
3. lihamba ixesha elide zingawakhuthaza intsalela ubuchule ingqondo nemithambo reflex, ungenza kakhulu ukuphucula umgangatho ubuthongo, eNamandla, zizele amandla zobutsha, anti-ukwaluphala, kuthintela kukuvela isifo i-Alzheimer.
4. Imali scooter zombane isiphumo ukufaneleka ezemidlalo, kodwa unako ngempumelelo ukulawula ubunzima bakho, ukuthintela ukutyeba.
5. movement imoto balance Electric ayikho nje imidlalo luncedo, okanye imisebenzi entsonkothe ​​kwezentlalo, unako ukwenza abahlobo abatsha, ukuphumeza iintlobo ezahlukeneyo, wabatyebisa umxholo yobomi, ukuphelisa kwanokunciphisa imikhwa emibi.